Global Voices teny Malagasy » Shina: “Nisy Zavatra Tsaroanao ny Talohan’ny Nangalarana Anao?” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Andy Yee Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Katroka 7 Miliara
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 dia nanao fanentanana hiadiana amin'ny fangalaran-jaza ny manampahefana eto Shina. Tamin'ny faran'ny taona 2010, nasehon'ny tarehimarika ofisialy  (tsy voatery azo inoana) fa trangana fanondranana vehivavy 9165 sy fanondranana ankizy 5900 no fantatra; ankizy 9388 sy vehivavy 17.746 no voavonjy, ary andian-jiolahy mpangala-jaza sy vehivavy 3573 no rava.
Ny isa marin'ny isan'ny voavonjy dia be lavitra noho ny isan'ny ankizy nisy nangalatra. Araka ny fanombatombanana  farany dia eo ho eo amin'ny ankizy 70000 isan-taona eo no lasan'ny andian-jiolahy isan-taona.
Amerikana liana dia liana momba an'i Shina i Custer. Mipetraka ao Beijing izy amin'izao fotoana izao ary mamahana ilay bolongana malaza ChinaGeeks , izay manome ny dika sy ny famakafakana momba ny tontolom-bolongana Shinoa. Ao amin'ny Lahatsary fanadihadiana dia te-hihoatra ny famakafakana sy ny antontanisa i Custer. Te-hametraka endrika teny misy momba ity olana ara-piaraha-monina ity izy amin'ny fifantohany amin'ny fitantaran'ny tsirairay sy ny fihetseham-po ao anatiny.
Tamin'ny faran'ny taona teo dia nanao antso hanangonam-bola ao amin'ny Kickstarter  i Custer hanaovana ilay lahatsary fanadihadiana. Noho ny valiny avy amin'ny malala-tanana izay mihoatra ny zato dia nahangona vola mihoatra ny $8,500 ny tetikasa ary dia nandany ny fotoana malalaka nananany i Custer hitadiavana, hiresadresahana ary handraketana antsary ray aman-dreny sy zaza nangalarina.
Tamin'ity volana ity moa dia nametraka vaovao farany  sy ny fandroson'ny film ny ekipa mpanatontosa :
Raha liana momba ity resaka ity ianao dia azonao jerena ny fandrosoana vitan'i Custer amin'ny famitana ilay lahatsary fanadihadiana ao amin'ny vohikala natokana ho amin'izany www.livingwithdeadhearts.com , Na raha liana momba ny ankizy misy mangalatra dia jereo ny tahala manokana ao amin'nyChinaGeeks.org . Raha te-hanampy ara-bola moa ianao dia tsidiho ny Tetikasa Shinoa mpanao asa-soa Baby Come Home  sy Xinxing Aid , izay manampy ny ankizy nisy nangalatra sy mirenireny an-dalambe amin'ny fomba maro samihafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/13/23653/
 tarehimarika ofisialy: http://news.southcn.com/z/2011-02/08/content_19822892_3.htm
 nanao antso hanangonam-bola ao amin'ny Kickstarter: http://www.kickstarter.com/projects/303039810/finding-home-documentary-on-kidnapped-children-in
 vaovao farany: http://chinageeks.org/2011/10/announcing-living-with-dead-hearts/